Ny Royal Site of Aranjuez sy ireo zaridaina mahafinaritra | Vaovao momba ny dia
Ny Royal Site of Aranjuez sy ireo zaridaina mahafinaritra
Aranjuez Hatramin'ny andron'ny Reconquest dia fananan'ny Order of Santiago izy io, izay manana lapa lehibe eto amin'ny toerana misy azy ny tompony lehibe noho ny halaviran'ny tontolony sy ny fahalemen'ny toetrandro. Rehefa notendren'ny mpanjaka katolika ny asan'ny Grand Master of Santiago, dia tafiditra tao amin'ny satro-boninahitra i Aranjuez. Ity lemaka mahavokatra ity eo amin'ny fihaonan'i Tajo sy Jarama, rehefa nandeha ny fotoana dia lasa ny fonenana quintessential firenena ny Spanish Royal Family.
Ny Habsburg dia naniry ny hanao an'i Aranjuez ho tanàna lehibe misy aingam-panahy avy any Italia ary ny tarana-mpanjaka Bourbon dia nanampy tamin'ny famolavolana ny hakanton'ny Royal Site, izay nandanian'izy ireo ny lohataona rehetra mandra-pahatongan'ny Jolay. Izany no mahatonga an'io tanàna any atsimon'i Madrid Nanjary nalaza tamin'ny lapany mahatalanjona sy zaridaina marefo izy io, izay zahin'ny mpizahatany an'arivony maro eran'izao tontolo izao isan-taona.
1 Tantaran'ny Royal Site of Aranjuez
2 Fomban'ny lapan'i Aranjuez
3 Ny atin'ny lapan'i Aranjuez
4 Toerana hafa inona no hitsidihana an'i Aranjuez
Tantaran'ny Royal Site of Aranjuez
Ny Emperora Carlos V dia nanapa-kevitra ny hanao an'ity lova ity ho villa be aingam-panahy avy any Italia, famolavolana notohizan'ny zanany lahy Felipe II taorian'ny nahafatesany, izay nandidy ny fananganana ny lapa vaovao eo amin'ilay toerana misy ny tompon'ny Order of Santiago. . Izy io dia manana ny mari-trano ho an'i Juan Bautista de Toledo (izay nanao ny lamin'ny arabe milahatra hazo izay mandamina ny faritany natokana ho an'ny zaridaina sy ny voly) ary Juan de Herrera.
Ny Bourbons dia nandray anjara tamin'ny fampivelarana ny hakanton'ity tranokala Royal ity. Felipe V dia nandamina zaridaina vaovao ary i Fernando VI dia ny fametrahana ny arabe milahatra hazo kokoa. Tamin'ny 1775 Carlos III dia nandidy ny fananganana elatra roa hafa ao an-dapa ary ny tanàna vaovao dia nahatratra ny fampandrosoana feno tamin'ny fotoana nanjakan'i Carlos IV. Ny mpanjaka monja Fernando VII sy Isabel II dia nanohy nitsidika an'i Aranjuez nandritra ny lohataona, ka ny voninahitry ny mpanjaka ny lapan'ny Aranjuez dia nijanona hatramin'ny 1870.
Fomban'ny lapan'i Aranjuez
Ny Royal Palace naorin'i Felipe II teo amin'ny toerana nisy ny lapan'ny Masters of Santiago taloha dia nanomboka tamin'ny 1564 ary manana ny maritrano ho an'i Juan Bautista de Toledo sy Juan de Herrera, izay ny antsasany ihany no nahavita. Na dia lfeno endri-javatra tany am-boalohany ny Renaissance Amin'ny fomba fanatonana azy, ny lapan'i Aranjuez dia mampiavaka ny klasikista ao amin'ny Habsburg miaraka amina vato fotsy sy biriky.
Ny drafitra tany am-boalohany dia notohizan'i Felipe V de Borbón tamin'ny 1715 ary nofaranan'i Fernando VI tamin'ny 1752 taorian'ny drafitra noforonin'i Juan Bautista de Toledo ary naharitra taonjato roa vao vita. Na izany aza, ny lapan'ny Aranjuez dia nijanona toy izany nandritra ny roapolo taona, hatramin'ny 1775 Carlos III dia nandidy ny hanampiana elatra roa hafa.
Ny atin'ny lapan'i Aranjuez
Raha te hitsidika ny atin'ny lapan'ny Aranjuez ianao, Ny tapakila dia tsy maintsy vidiana ao an-dapa. Ny vidiny dia miankina amin'ny fitarihana na tsia ny fitsidihana. Manoro hevitra anao aho hisafidy ny safidy voalohany satria misy mpitari-dia momba ny fizahan-tany matihanina milaza aminao ny tantaran'ny Royal Site of Aranjuez ary hanana fidirana amin'ny efitranon'ny mpanjaka sy ny Museum of Faluas amin'ny vidiny 15 euro ihany koa ianao. Mifanohitra amin'izany, Raha maimaim-poana ny fitsidihana dia 9 euro fotsiny no vidinaoEny, saingy tsy ho azonao ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo.
Ao an-dapa dia ho azonao atao ny mandinika ny lamba famaohana Flemish, sary hosodoko sy fanaka tsy misy fetra ary any ivelany dia afaka mankafy ireo zaridaina mahafinaritra nandalovan'ny mpanjaka sy ny andriana tao Espaina taonjato maro lasa izay. Maimaimpoana ny fidirana amin'izy ireo.
Toerana hafa inona no hitsidihana an'i Aranjuez
Trano Royal an'ny Labrador
Amin'ny maha-Carlos IV an'i Borbón Prince of Asturias azy, ny trano heva an'ny Ferdinand VI dia nampiasaina ho trano fialamboly ary ny Garden of the Prince dia noforonina manodidina. Rehefa niakatra teo amin'ny seza fiandrianana izy dia nanapa-kevitra ny hanangana amin'ny lafiny hafa amin'ireo zaridaina ireo trano vaovao iray antsoina hoe del Labrador, noho ny endrika manetriketrika izay natao hatrany am-boalohany hanoherana ny rendrarendra anatiny. Ny firavaka dia i Jean-Démosthène Dugourc no namorona azy ireo indrindra ary ny fitaomana frantsay sy italianina no malaza. Ny fomban'ny Empira no miverimberina indrindra.
Ny Real Casa del Labrador dia naorin'ny mpanao maritrano lehibe Juan de Villanueva sy ny mpianany Isidro González Velázquez, izay tokony hanefana ny sasany ao anatiny.
Tamin'ny 2001 dia voatanisa ho Lova eran-tany, miaraka amin'ny kaontinanta ara-javakanto manan-tantara hafa ao an-tanàna, voasoratra ao amin'ny lisitry ny Unesco mitondra ny anarana hoe Landscape Culture of Aranjuez. Ny fitsidihanao dia avela, manomboka amin'ny ora maro.
Trano hafa misy fahalianana be hitsidika an'i Aranjuez dia ny lapan'i Medinaceli, ny tranon'ny mpivarotra sy ny Knights, ny tranon'ny mpiasa, ny fiangonan'i San Antonio, ny Plaza de Toros, ny Mercado de Abastos na ny Hopitaly de San Carlos.
Ny zaridainan'ny Mpanjaka, ny Nosy, ny Parterre ary ny andriana
Felipe II, tena tia zaridaina, dia nanao ezaka manokana handravaka an'i Aranjuez. Ny Garden of the Island, noforonin'ny mpanao mari-trano Juan Bautista de Toledo, ary ny an'ny Mpanjaka avy hatrany mankany amin'ny lapan'andriana ary noho ny Felipe IV no haingony ankehitriny dia voatahiry hatramin'ny androny.
Ao amin'ny Nosy ihany koa, ny ankamaroan'ny loharano dia avy amin'i Felipe IV, na dia nanohy nanankarena azy tamin'ny antsipiriany toy ny moron'ny Carlos III aza ny Bourbons.
Felipe V dia nanampy an'ireo zaridaina efa misy an'i Parterre manoloana ny lapa ary ny faran'ny faran'ny Garden of the Island, nantsoina hoe Isleta, izay nametrahany ny Loharanon'ny Tritons izay nentin'i Isabel II tany Campo del Moro.
Ny Garden of the Prince dia manana ny anarany sy ny namoronana azy ho an'ny zanakalahin'i Carlos III izay tamin'ny taona 1770 dia nanomboka nampiasa ny seranana Ferdinand VI taloha ho trano fialamboly ary hampivelatra zaridaina amin'ny fomba Anglo-frantsay amin'ny manodidina miaraka amin'ny fitaomana mivantana avy amin'ny zaridainan'i Marie Antoinette ao amin'ny Petit Trianon.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Ny Royal Site of Aranjuez sy ireo zaridaina mahafinaritra
Akanjo mahazatra an'ny vehivavy meksikana
Inona ireo lohasaha lehibe indrindra eto an-tany?